Madaxda Maamul goboleedyada oo Deg deg u imaanaya Muqdisho iyo Sababta ka dambeysa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxda Maamul goboleedyada oo Deg deg u imaanaya Muqdisho iyo Sababta ka dambeysa
Madaxda maamul Goboleedyada ee hadda ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubba Land halkaasina ku yeeshay shir looga hadlayay arimaha maamul Goboleedyada ayaa la sheegayaa iney ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Ilo Xog-ogaal ah ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo ayaa la hadlay shanta maamul Goboleed ee ku shiray magaalada Kismaayo iney si dhaqso ah ku yimaadaan magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in marka ay soo saaraan warmurtiyeedka Shirkaasi ay usoo amba baxayaan Magaalada Muqdisho si ay ula fadhiistaan Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si ay isla meel dhigaan Geedi Socodka Dalka.
Qodobo dhowr ah ayaa la sheegayaa in Madaxda shanta ah ee kala matalaya Jubbaland, Koofur Galbeed, Galmudug, Puntland iyo Hir-Shabeelle ay hor dhigayaan Dowladda Federaalka ah oo uu hogaamiyo Mudane Farmaajo.
Qodobadaasi oo qaarkood aan ka helnay Xubno safar ku wehliya Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa u muuqda Gor-gortan ay ku doonayaan in Dowladda ay kala galaan Dhinacyada Siyaasadda iyo Dhaqaalaha, waxaana kamid ah:-
Xal u raadinta Xiisadda siyaasadeed ee Galmudug, Maadaama Madaxweyne Xaaf uu shirka madaxda Dowlad Goboleedyada kahor sheegay in Dowladda ay Ciidamo u dirtay si loo xiro, baqdinne uu ka muuqiyey arrintaa.
Wada shaqeynta dawladda Faderaalka iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada si gaar ah Go’aamada la qaadanayo.
In Dowladdu ay ku tix galiso Go’aankooda ee ah in ay ka qaateen Arrimaha Khaliijka, isla markaana ay gaar u tahay Dowlad Goboleedyada.
Kordhinta Deeqaha laga helo Beesha Caalamka oo si siman Dowladda usiiso madaxda Dowlad Goboleedyada, waxaana la sheegayaa in arrinkaan uu soo jeediyey Madaxweynaha Koofur Galbeed oo doonayo in Saami siman ay qaataan Madaxda Dowlad Goboleedyada.
Dowladda federaalka ayaanan la ogeyn sida ay u aqbali doono Qodobada qaar ay hordhigayaan Madaxda Maamul Goboleedyada sida tan Xiisadaha Khaliijka, oo Dowladda federaalka labo jeer ayee ka qaadatay Go’aan Dhex dhexaad ah, waana Midda la sheegayo in ay keentay kulankaan.